Coronavirus ကိုတိုက်ထုတ်ရင်း ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။ – SoShwe
Home/LifeStyle/Coronavirus ကိုတိုက်ထုတ်ရင်း ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။
Coronavirus ကိုတိုက်ထုတ်ရင်း ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။
So Shwe May 27, 2020	LifeStyle Leaveacomment
အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူသတ်လက်နက်ကို အသုံးမပြုတဲ့စစ်ပွဲကို ဖော်ပြပါဆိုရင်တော့ လူသားတွေနဲ့ လူသားတွေရဲ့အသက်ကို နှုတ်ယူနေတဲ့ Coronavirus တို့ကြားက စစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့အသက်ကို သေမင်းလက်ထဲကနေ ပြန်လုယူနေတဲ့ သက်ရှိသူရဲကောင်းတွေကတော့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ သူနာပြုတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Coronavirus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာတွေကို အနီးကပ်ဂရုစိုက် ကုသပေးနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် ယခုအချိန်ဟာ အခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှိသူရဲကောင်းလေးတွေဟာ သေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပေမယ့်လည်း ရောဂါဆိုးကြီးကို ကိုယ်ခံအားကောင်းနေမှမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပျော်အောင်နေရင်းနဲ့လည်း တိုက်ထုတ်နိုင်ကြောင်းကို လူသားတွေကို မျှဝေအသိပေးထားပါတယ်။
၁။ မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ လက်အိတ်တွေလိုအပ်ကြောင်း ထူးခြားတဲ့နည်းနဲ့ အသိပေးခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။
၂။ အပြင်သွားရင်မျက်နှာဖုံးဝတ်သွားဖို့က အရေးကြီးပေမယ့် လက်ဆေးဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Masks helpalittle but please wash your hands every chance you get. Especially if they touch anything questionable. #coronavirus #healthcare #masks
♬ Boy – ODESZA
၃။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို ငဲ့ညာသနားဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ သူနာပြုမလေး။
PSA TO THE PEOPLE WHO ARE ATTACKING HEALTH CARE PROVIDERS IN PUBLIC #nursing #healthcare
၄။ ပိုးမွှားကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင် လက်ဆေးနည်းပါ။
၅။ လူမျိုးခွဲခြားမှုကို ဟာသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ သူနာပြုမမ။
၆။ မနက်ဖြန်ဆိုတာမသေချာတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကနေကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။
၇။ တကယ်ကို ပျော်ရွှင်စွာကနေတာပါ။
၈။ တွေ့သမျှအရာတွေကို လက်နဲ့လိုက်မထိနေပါနဲ့။
၁၀။ ကိုယ့်ကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေဟာလည်း ဆေးတစ်မျိုးပဲ။
၁၁။ ဒိုက်လေးက ပြေးထိုးရသေးတယ်။
၁၂။ အားလုံးအတူတူ ကကြမယ်။
၁၃။ အသက်ကယ် ဆေးပညာဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးတယ်။
၁၄။ အနုပညာအသိလည်း ကြွယ်ဝတယ်။
၁၅။ ဟာသဉာဏ်လည်း ရွှင်နေရမယ်။
၁၆။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို မဖြစ်မနေ အစွမ်းကုန် တိုက်ထုတ်နေရတယ်။
၁၇။ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတောင်မှ ပျော်ပျော်နေတတ်ဖို့မမေ့တဲ့ သူရဲကောင်းများ။
၁၈။ ရှေ့တန်းကနေ တိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့ သူရဲကောင်းများ။
၁၉။ သာမန်လူတွေက ကျေးဇူးမတင်ပဲမနေနိုင်တဲ့ သက်ရှိသူရဲကောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။
Literally got paged right after this! #doctor #covid19 #coronavirus #healthcare
Coronavirus ကိုတိုက္ထုတ္ရင္း ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၾကတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား။
အခုလက္ရွိ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူသတ္လက္နက္ကို အသံုးမျပဳတဲ့စစ္ပြဲကို ေဖာ္ျပပါဆိုရင္ေတာ့ လူသားေတြနဲ႕ လူသားေတြရဲ႕အသက္ကို ႏႈတ္ယူေနတဲ့ Coronavirus တို႔ၾကားက စစ္ပြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕အသက္ကို ေသမင္းလက္ထဲကေန ျပန္လုယူေနတဲ့ သက္ရွိသူရဲေကာင္းေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ သူနာျပဳေတြနဲ႔ ဆရာဝန္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
Coronavirus ကူးစက္ခံထားရတဲ့ လူနာေတြကို အနီးကပ္ဂ႐ုစိုက္ ကုသေပးေနရတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုအခ်ိန္ဟာ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သက္ရွိသူရဲေကာင္းေလးေတြဟာ ေသဆံုးသြားတဲ့လူနာေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကရေပမယ့္လည္း ေရာဂါဆိုးႀကီးကို ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနမွမဟုတ္ဘဲ စိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ေနရင္းနဲ႔လည္း တိုက္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို လူသားေတြကို မွ်ေဝအသိေပးထားပါတယ္။
၁။ မ်က္ႏွာဖံုးေတြနဲ႔ လက္အိတ္ေတြလိုအပ္ေၾကာင္း ထူးျခားတဲ့နည္းနဲ႔ အသိေပးခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား။
၂။ အျပင္သြားရင္မ်က္ႏွာဖံုးဝတ္သြားဖို႔က အေရးႀကီးေပမယ့္ လက္ေဆးဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
၃။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ငဲ့ညာသနားဖို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့ သူနာျပဳမေလး။
၄။ ပိုးမႊားကင္းစင္ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ လက္ေဆးနည္းပါ။
၅။ လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈကို ဟာသနဲ႔တံု႔ျပန္လိုက္တဲ့ သူနာျပဳမမ။
၆။ မနက္ျဖန္ဆိုတာမေသခ်ာတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ကေနၾကတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား။
၇။ တကယ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာကေနတာပါ။
၈။ ေတြ႔သမွ်အရာေတြကို လက္နဲ႔လိုက္မထိေနပါနဲ႔။
၁၀။ ကိုယ့္ကိုရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာေတြဟာလည္း ေဆးတစ္မ်ိဳးပဲ။
၁၁။ ဒိုက္ေလးက ေျပးထိုးရေသးတယ္။
၁၂။ အားလံုးအတူတူ ကၾကမယ္။
၁၃။ အသက္ကယ္ ေဆးပညာဗဟုသုတေတြ မွ်ေဝေပးတယ္။
၁၄။ အႏုပညာအသိလည္း ႂကြယ္ဝတယ္။
၁၅။ ဟာသဉာဏ္လည္း ရႊင္ေနရမယ္။
၁၆။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို မျဖစ္မေန အစြမ္းကုန္ တိုက္ထုတ္ေနရတယ္။
၁၇။ တိုက္ပြဲအတြင္းမွာေတာင္မွ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ဖို႔မေမ့တဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ား။
၁၈။ ေရွ႕တန္းကေန တိုက္ခိုက္ေပးေနတဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ား။
၁၉။ သာမန္လူေတြက ေက်းဇူးမတင္ပဲမေနႏိုင္တဲ့ သက္ရွိသူရဲေကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား။
Source ~ Buzzfeeds
Previous မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများအသင်းနဲ့ Slade အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီး ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ? ? ?
Next Coronavirus ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ?